Nyamko Sabuni oo ku guuleysatay Siyaasadeeda ah in lala Shaqeeyo Xisbiga SD Somali - Wararka Somalida, Caalamka
HomeWararka SwedenNyamko Sabuni oo ku guuleysatay Siyaasadeeda ah in lala Shaqeeyo Xisbiga SD
Nyamko Sabuni oo ku guuleysatay Siyaasadeeda ah in lala Shaqeeyo Xisbiga SD
Dhibaato ayaa ka jirta Xisbiga Liberalerna. Muranku wuxuu ku saabsan yahay siyaasadda xisbiga. Nyamko Sabuni ayaa rabta inay la shaqeyso xisbiga Sverigedemokraterna. Tani waxay kordhisaa fursadaha ay Libaraalku ugu biiri karaan dowlad doorashada soo socota ka dib.
Siyaasiyiin badan oo ka tirsan xisbiga Libaraalka ayaa qaba inay khalad tahay. Madama aysan jecleen siyaasadaha xisbiga Sverigedemokraterna. Ma rabaan inay la shaqeeyaan iyaga.
Axadii, Liberalerna waxay yeesheen kulan weyn oo lagu go’aaminayo siyaasadda. Kadib intoodii badnayd waxay u codeeyeen soojeedintii Nyamko Sabuni. Xisbigu waa inuu awood u yeesho inuu lashaqeeyo xisbiga Sverigedemokraterna.
– Hadda waxaan ugu dambeyn fursad u helnay inaan helno dowlad cusub, Nyamko Sabuni ayaa yiti kulanka kadib.
Laakiin qaar badan oo xisbiga ka mid ah ayaa niyad jabay. Dhawr siyaasiyiin ah ayaa sheegay in aan la hubin inay rabaan inay ka sii shaqeeyaan xisbiga.
Sannadihii ugu dambeeyay, xisbiga Libaraalku waxa ka mid ahaa, inay iskaashi la sameeyeen xisbiga Sooshal dimuqraadiga. Nyamko Sabuni ayaa dooneysa inay soo afjarto tan kadib doorashada sanadka dambe.